မြန်မာသံရုံး၊ မော်စကိုမြို့တွင် ASEAN Day Reception 2019 အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း – Ministry of Foreign Affairs
မြန်မာသံရုံး၊ မော်စကိုမြို့တွင် ASEAN Day Reception 2019 အခမ်းအနား ကျင်းပခဲ့ခြင်း
(၃၀-၈-၂၀၁၉ ရက်၊ မော်စကိုမြို့)
ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ မော်စကိုမြို့အခြေစိုက် ASEAN Moscow Committee (AMC) က (၅၂) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံနေ့အထိမ်းအမှတ် ဧည့်ခံပွဲတစ်ရပ်ကို မြန်မာသံရုံး၊ မော်စကိုမြို့တွင် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဩဂုတ်လ ၂၉ ရက်၊ နံနက် ၁၁၀ဝ နာရီမှ ၁၃၀ဝ နာရီအထိ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါ ဧည့်ခံပွဲသို့ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Igor Morgulov၊ ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ရုရှားစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနတို့မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ မော်စကိုမြို့အခြေစိုက် အာဆီယံသံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ အမေရိကန်၊ ဂျပန်၊ တောင်ကိုရီးယား၊ နယူးဇီလန်၊ ဩစတြေးလျ၊ သီရိလင်္ကာ၊ ပါကစ္စတန်၊ လက်ဘနွန်၊ အိုမန်နှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံများမှ သံအမတ်ကြီးများနှင့် ဇနီးများ၊ နိုင်ငံခြားသံရုံးများမှ သံရုံးယာယီတာဝန်ခံများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ရုရှား-အာဆီယံ စီးပွားရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနှင့် အခြားဖိတ်ကြားထားသည့် ဧည့်သည်တော်များ စုစုပေါင်း (၁၅၀) ခန့် ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရုရှားနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယဝန်ကြီး H.E. Mr. Igor Morgulov၊ အာဆီယံ-မော်စကိုကော်မတီ အလှည့်ကျဥက္ကဋ္ဌ ထိုင်းနိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Thanatip Upatising နှင့် ရုရှား-အာဆီယံစီးပွားရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Mr. Ivan Polyakov တို့က မိန့်ခွန်းများ ပြောကြားခဲ့ကြပါသည်။ အခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်လာကြသည့် ဧည့်သည်တော်များအား အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံများမှ ရိုးရာအစားအသောက်များဖြင့် တည်ခင်းဧည့်ခံခဲ့ကြောင်း သိရှိရပါသည်။